छोरी - हाम्रो शब्द
‘तिमी त छोरी मान्छे !’ यो बाक्यले नै साँघुरो र अनुहार अँध्यारो बनाउँदछ । कहिलेकाहीँ छोरी हुनुमा गर्भ लाग्छ, तर समाजको दृष्टिबाट हेर्दा छोरीमा जन्म लिनु नपरेको भए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ । समाजको हेपाइले जहिले छोरी मान्छेलाई कमजोर बनाउँदछ । हाम्रो समाजमा छोरी मान्छेको विवाह उसको शिक्षाभन्दा बढी प्राथमिकता दिइन्छ । छोरी मान्छे बिहे गरेर जानैपर्छ उमेर पुगेपछि माइतीमै बस्यो भने समाजले कुरा काट्न थाल्छन् । कहिलेकाही समाजका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई सोध्न मन लाक्छ के छोरी मान्छेको घर हुँदैन र ऊ जति सक्षम भएपनि आफ्नो जीवनलाई आफ्नो अनुसार बाँच्न नपाउनु ? जब आफ्नो जन्मघर आफ्नो हुँदैन भने संसारमा कुन घर आफ्नो हुन्छ र रु भनिन्छ नि, छोरी मान्छेको दुईवटा घर हुने गर्छ तर बा-आमा बाचुन्जेल माइतिघर आफ्नो हुन्छ भने श्रीमान हुन्जेलसम्म श्रीमानको घर आफ्नो हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने छोरी मान्छेको भाग्यले मात्र उसको कर्म घरनिर्धारण गर्दछ । छोरी मान्छेको जीवन कहाँ सहज हुन्छ र छोरी मान्छेको घर नभए पनि आफ्नो मान्छेको माया र साथ मात्र भइदियो भने नै ठूलो उपहार हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ जन्मदिने बाआमा पनि कठोर स्वभावका भइदिन्छन् भने जीवनभरिसँगै जिउनेसंगै मर्ने बाचा–कसम खाएको जीवनसाथी पनि निर्दयी भइदिन्छ । छोरी मान्छेको जिबनमा योभन्दा ठूलो चोट केही हुँदैन ।
किन हाम्रो समाजमा छोरीहरुलाई पराइ घर जाने जात भनेर बुझिन्छ रु पराइ घर कस्तो हुन्छ रु समाजले छोरी मान्छेमा मात्र किन औंला ठड्याउँछन् । छोरी मान्छेलाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो जीवन बाच्ने अधिकार हुन्न र रु केही पुरुषहरु किन यती दानवभन्दा भयानक बनिदिन्छन् ? पुरुषको मात्र के कुरा गरौ हाम्रो समाजमा त कति महिलाले महिलामाथि नै क्रूर व्यवहार देखाउँछन् । एउटी नारीलाई अर्को नारीले दिनुपर्ने साथ सहयोग हुन्छ, त्यसको सट्टामा किन शत्रुताजस्तो व्यवहार देखाइन्छ रु जीवन सबैको लागि मूल्यवान हुन्न र रु कसैले रहर लागेर आफ्नो जीवन लाई समाप्त गर्न चाहँदैन । तर बिडम्बना हाम्रो समाजको छोरीलाई मर्नको लागि बाध्य बनाइदिन्छन् । छोरी मान्छे छोरी मान्छे नै घरको इज्जतको भार बोकेका हुन्छन् । के हो जिम्मेवारी छोरा मान्छेको हुन्न रु के छोरी भएर जन्म लिनु अपराध हो रु र छोरीलाई माया मात्र होइन सहि सल्लाह र अवसरको पनि खाँचो छ ।
एउटा कुरा समाजमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु, छोरा र छोरी कहिले बराबर हुन्न किनभने छोरी मान्छेको जस्तो जिन्दगी बाच्ने साहास कुनैपनि छोरा मान्छेमा हुन्न । जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म पराई भनेर सम्बोधन गरिन्छ । हजारौं सपना र इच्छाहरु मनभित्र दवाइन्छ । बिहे हुनुपूर्व बाआमाको लागि र बिहेपश्चात श्रीमानको लागि र त्यसपछि आफ्नो सन्तानको लागि बाँच्ने नारीहरुलाई आफ्नो जीवन बाच्ने आधिकार नै हुन्न । हामी मन्दिरमा गएर दुर्गालाई ढोग गर्ने तर घरको छोरी बुहारीलाई किन पराइ सम्झिने ?
सोच मात्र बदल्न आवश्यक छ बिस्तारै बिस्तारै सबैको जीवन आफै सहज हुने गर्छ । यहाँ सबैलाई खुशी चाहिन्छ, मानसिक सन्तुष्टि चाहिन्छ । जीवन सबैको लागि मूल्यवान हुन्छ । कसैलार्इ रहर लागेर आफ्नो जीवन समाप्त गर्न चाहँदैन । सबैको आफ्नो छुट्टै कथा र बेथा हुनेगर्दछ । सबैले छोरा मात्र खोजे छोरी कहाँ पाइन्छ रु समाज चलाउन छोरा छोरी दुवै चाहिन्न र ? हरेक कार्यमा महिला अर्थात छोरी चाहिन्छ । हाम्रो समाजमा छोरी मान्छेको जीवन कहाँ सहज छ र हरेक पाइलामा चुनौती मात्र हुन गर्छ ।
छोरीविना पुरुषको मात्र होइन एउटा परिवा नै चल्न सक्दैन । छोरीको वास्तविक घर हुन्न तर छोरी बिना कुनै घर पनि घर हुन्न । यहाँ छोरीको महत्व शब्दमा बयान गर्न सकिन्न । एउटी नारीले अर्को नारीको पीडा मात्र बुझिदिने भए पनि नारीको जीवन कति धेरै सहज हुन्थ्यो होला त्यो मनभित्र कति धेरै सपना इच्छा र रहरहरु दबाइएका हुन्छन् कत्ति धेरै कुराहरु त अरुलाई सुनाउन पनि सकिँदैन । जबसम्म निषेधको व्यवहारबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौं, तबसम्म लैंङ्गिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । नारीबाट नारीकै भाग्य परिक्षा आज पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय बनेको छ । नारी र पुरुष दुबै उत्तिकै बराबरी हैसियतका छन । अवसर र चुनौती स्वीकार गर्न नसक्नु छोरी–चेली पछि पर्नुको मुख्य कारण हो । बाहिरी जिवनभन्दा पनि कठिन हुने गर्दछ घरभित्रको जीवन । अहिले पनि हाम्रो घर परिवार समाज बाल विवाह, बहुविवाह कतै बोक्सीको आरोप भने कतै घरेलु हिंसा तथा महिला भएकै कारणले महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारहरु पनि धेरै प्रकारका छन् । अहिलेको समाजमा धेरै कुराहरु परिवर्तन भएको छ, तर महिलाहरु दासत्वबाट अझै मुक्त भएनन । दासत्वको रुप मात्र फेरिएको छ महिलाको स्थिति कतिपय ठाउँमा जहाँको त्यहीँ देख्न सकिन्छ ।
शारिरिक रुपमा महिला र पुरुषको बनावट नै फरक–फरक हुन्छ । प्रकृतिको बनावटलाई एकअर्कासँग तुलना गर्न मिल्दैन । शरीर विविध प्रकृतिका हुन सक्छन् । तर तिनीहरू एकअर्काका निम्ति दमन गर्न बनेका होइनन् । महिला हिंसा तथा छोरी अथवा भनौ नारीमाथि दुर्व्यवहार पुरुषले मात्र गर्दछन् रु अधिकांश भेदभाव त महिलाबाट नै हुनेगर्दछ । सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा तथा घरपरिवारको डरको कारणले सकेसम्म महिलाहरु आफू माथिका हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् ।
यहाँ महिलामाथि हुने व्यवहार एकदमै तल्लो स्तरको पनि हुने गर्दछ । हाम्रो समाजमा महिला हिंसाका रूपहरू अझै फेरिएका छैनन् । धेरै शिक्ष्क्षाको स्तरमा समाजले प्रगति गरे पनि महिलाको सन्दर्भम खासै सुध्रेको देखिन्न । सबैको जिवन एकैनासको हुन्न, सबैको आफ्नै छुट्टै कथा र व्यथा हुने गर्दछ । धेरै महिलाहरूको मनमा एक पटक भए पनि अबस्य यो प्रश्न उठ्ने म पनि छोरा भएको भए हुन्थ्यो होला । कतिपय दुःख त महिला भएकै कारण मात्र सहनु पर्दछ । छोरीमा जन्म लिनु गर्भजस्तो पनि लाग्छ, तर छोरी मान्छेको जीवनशैली र भोगाइ हेर्दा छोरी मान्छेमा जन्म लिनु नपरेजस्तो पनि लाग्छ ।
हाम्रो समाज अझै पनि पुरानो सोचलाई त्याग्न सकेको छैन । सानादेखि नै भेदभाव तथा महिलाको जिवनको हरेचाहमा उनीहरुलाई भेदभाव र हिंसाको सिकार हुनु पर्दछ । धेरै कुराहरु हुन्छन्, जसले एउटा नारीलाई यातना दिइरहेको हुन्छ । धेरै यस्ता कुराहरु पनि छन्, जुन शब्दमा उनिहरू प्रकट गर्न सक्दैनन् । मनका कुनामा हजारौं गुनासोहरु हजार सपनाहरु गुम्साएर राखेका हुन्छन् । जब कुरा महिलाको हुन्छ तब हामी दोषी केवल पुरुषले मात्र देख्ने गर्दछौं । तर वास्तविकता त्यो होइन कति धेरै महिलाहरु त महिलाकै व्यवहारबाट पीडित छन् । एउटा महिला भएर महिलाको पिडा नबुज्ने कस्तो महिला हुन्छिन होला रु भनिन्छ नि यो संसारमा एउटा नारीको दुःख अर्को नारीले बुझ्लिछन्, हो यो कुरा सत्य हो । तर महिलाहरुले नै अर्को महिलालाई यातना तथा दुख दिने गर्दछन् । वास्तवमै छोरी मान्छेको घर हुन्न र रु सबै व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन आफ्नो ढंगले बाँच्ने अधिकार हुनुपर्दछ । छोरा–छोरीमा गरिने भेदभाव, छोरी–बुहारीमा गरिने भेदभाव आखिरमा किन ? सृष्टिको सबै मानिस एउटै हैन र ?
विछोड प्रेमी (कविता)
नेकपा एमालेले पठायो सुनसरीका ५ जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण पत्र